Izithenjwa ze-SmallHD Debuts Reference-Ibanga 4K OLED | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » I-LittleHD Debuts Reference-Ibanga 4K OLED
I-LittleHD Debuts Reference-Ibanga 4K OLED
Okusebenzayo: Julayi 29, 2020
EncaneHD Amaphuzu Okubheka-Ibanga 4K OLED
Ama-oda we-SmallHD 4K Production Monitors aqala namuhla
I-LittleHD OLED 22
I-SmallHD imemezela ukungena okusha esikhungweni sokuqapha sereferensi ebangeni: i-OLED 22 4K Production Monitor. Ukusetha indinganiso entsha yabahlanzayo bemibala, lesi sibukeli esibonisa umbala we-4K simangalisa izinto eziningi ezithuthukisiwe ezifunwa ngabasebenzisi be-OLED.
Ama-DITs, ama-DP, nama-Colourist abelinde ukuthi kuzwakale kanjani ukuthi kuthathe indawo yakudala HD Abaqaphi be-OLED, ”kusho uGreg Smokler, weCreative Solutions VP Yomkhiqizo. "Kungakho-ke sichithe iminyaka engaphezu kwemi-2 sakha i-OLED 22, isithombisi sokukhiqiza sokuqala se-4K OLED esingafakwanga sici esisetshenziswayo ekugcineni esizogcina sibukhali izithombe ze-4K, kusethi nakwezombala."
I-SmallHD OLED 22 Emuva
Umklamo wehardware we-OLED 22 wakhelwe ezungeze i-Small4K ™ Video Processing Architecture, enikeza izinketho zokufaka / zokuphuma ezingenakuqhathaniswa nezinketho eziyisishiyagalombili ze-12G-SDI nezimbili I-HDMI Amachweba we-2.0, wonke anika amandla ukucutshungulwa kwesiginali ye-4K. Yakhiwe ngokhakhayi olugobekile, ongenamuntu, owenziwe nge-aluminium ohlanganisa ama-36 ¼-20 points we-22 wamaphuzu okukhuphuka ngaphezulu nangaphezulu, i-OLED 9.3 inesisindo-ku-featherweight isamba esingu-4.2-lbs / XNUMXkg. Isibambo esikhiphekayo nezinyawo zivumela ukuthwala kalula.
Isibonisi se-OLED 22 cishe asinakho ukonakaliswa kwesithombe kunoma iyiphi i-angle yokubuka, sinikela ngesithombe sangempela sesicacile futhi siveza njengomphumela wokugcina, noma ngabe kusethiwe noma eposini.
Ukuqapha ama-specs kuhlola uhlu oluhehayo lwezici ezifunwayo: 21.6in / 55cm usayizi wesibuko,> 1,000,000: 1 isilinganiso sokuqhathanisa nephoyinti elimnyama ngokuphelele, ukujula kombala okungu-10-bit kokuthembeka kombala okungahambanga kahle, ukulungiswa kwe-3840 × 2160, izinga lokukhanya le-350nit, kanye I-100% P3 / 135% Rec 709 color gamuts ekhiqiza ukukhiqizwa kombala okuyiqiniso.
Izinketho zamandla zihlanganisa okokufaka kukagesi okushisayo okushisayo kabili: i-XLR engu-3-pin kanye ne-slide-on Dual Battery Plate (Izinketho zeGold Mount & V-Mount, zithengiswa ngokwehlukile), onganamathiselwa nge-Smart Rail eyakhelwe ohlangothini lwangemuva lomqaphi. Imiphumela emibili yokungena yokuvala okhiye ongu-2 yengeza ukuguquguquka kwamandla kumadivayisi angeziwe.
Inkululeko ephelele, engafinyelelwanga, i-OLED 22 is I-Teradek Bolt 4K iyahambisana: inhlanganisela efanelekile yokuqapha i-cable-free, ukuqaphela kwe-zero-ukubambezeleka ku-4K 10-bit HDR.
Ngokuqondana nokukhishwa kwe-OLED 22, iSmallHD ibuye yethule nethuluzi layo eliyinkimbinkimbi kakhulu langaphakathi okwamanje: I-PageOS 4. Ngale software entsha, abasebenzisi bathola ukufinyelela okulula kuhlu olwahlukahlukene nolungenziwa ngezifiso lwamathuluzi wokuvezwa akhethiwe kanye nokuhamba komsebenzi kokusebenza komkhiqizo okuthuthukisiwe. Ngaphandle kwenqwaba yokuthuthuka ukuze kube lula nesivinini, i-PageOS 4 isekela umuzwa olinganiselwe wokulinganiswa kombala nge-Colour Pipe, ithuluzi lokunikeza elinembile eliguqula ngokunembile amafomethi we-log abe yi-SDR ne-HDR. I-PageOS 4 ifaka phakathi ukuthuthuka okukhulu ekuhlelweni kwangaphambili kwekhasi lomsebenzisi, ama-waveform we-4K HDR (PQ), umbala onamanga othuthukisiwe, nezinketho zokubuka ezimbili / isikwele – kanye nokugcina izici ezifanayo ezinokwethenjelwa ezaziwa kubasebenzisi babaqaphi be-PageOS abahlonywe ngaphambilini.
I-LittleHD OLED 22 4K Production Monitor inikezwa ngentengo yesingeniso yesikhathi esilinganiselwe sama- $ 11,999. Ukuthunyelwa kulindeleke ukuthi kuqale ngo-Agasti 2020.
Ngaphezu kwe-OLED 22, ama-New 4D Production Monitors amasha ahlanganisa ama-Vision 24 nama-Vision 17 HDR monitor, kanye ne-Cine 24 4K High-Bright track. Zonke okwamanje zitholakala ngamanani akhethekile wesingeniso sesikhathi esilinganiselwe.
Ukuthola ulwazi olunabile, vakashela: www.smallhd.com/4K
Mayelana ne-Creative Solutions
Indlunkulu eSouthern California, Vitec Imiklamo ye-Creative Solutions Division yeqembu yakha futhi yenze imikhiqizo ye-premium yabasakazi, izinkampani zokukhiqiza amafilimu namavidiyo, abadali bokuqukethwe abazimele namabhizinisi amabhizinisi. Kuhlanganisa imikhiqizo I-Teradek, I-SmallHD, ne-Wooden Camera, imikhiqizo ye-Creative Solutions isetshenziselwa umhlaba wonke kwezemidlalo, izindaba, imicimbi ebukhoma, ukukhiqizwa kwamafilimu nethelevishini nokusakazwa ku-inthanethi. ICreative Solutions inezikhungo zokukhiqiza nezama-R & D e-US, UK, Israel nase-Continental Europe.
Isungulwe ku-2009, i-SmallHD iye yenze igama njenge-innovator entsha yezisombululo zokuqapha ikhamera yama-cinematographer ochwepheshe, ama-videographers, nabathwebuli bezithombe emhlabeni jikelele. Abadali bokuqapha kwencazelo yekhamera yokuqala ye-high-level, i-SmallHD iyaqhubeka ishaya imvilophu yalokho okusemandleni ekhamera ye-kamera, studio nokukhiqiza. www.smallhd.com
IMISEBENZI ye-3D ukulungiswa kokuthambisa i-autofocus Yokusakaza ukulawulwa kwekhamera Ama-cinematographers ukugcwaliswa kombala izixazululo zokudala ukukhanya kwemini ifilimu gxila Gxila Pro Ukukalwa kwe fulemu qokomisa ukukhishwa IKOMODO I-LCD design engasindi Gada AmaNits OLED ukuqapha kwekhamera Ukuqapha Kwekhamera imephu yethoni yokuphuma production isibonisi sokukhiqiza ifomethi yokuqopha Ikhamera yeRED Resolution isivinini se-shutter EncaneHD Ukusakaza ithelevishini I-Teradek Isikrini sokuthinta Ividiyo ama-vidiyo I-Vitec Group Ikhamera Yokhuni 2020-07-30
Ngaphambilini: I-Broadcast Pix Imemezela u-0% Ukuxhaswa ngezimali kumasystems we-StreamingPix
Olandelayo: I-ATEME Inika amandla i-QNET Telecom Ukuthumela Okuphezulu Kwekhwalithi Yevidiyo